Ajụjụ - Hebei Tiiec Machinery Co., Ltd.
Egweri Machinery Parts
Rubber na Polyurethane eyi Parts
Ndị ọzọ na-eyi na-eguzogide Parts
NA SITE nyere
REBUILDS NA REPARS
Ihe m kwesịrị ịma banyere slurry nfuli?
(1) The slurry mgbapụta akụkụ ahụ mapụtara eyi
The slurry nfuli 'wear akụkụ nwere ike oghere ụbọchị n'ihi na nke corrosive na abrasive slurry. Karịsịa mgbe ị na-ahọrọ na-ezighị ezi ihe onwunwe slurry nfuli na slurry mgbapụta edochi anya maka gị akpan akpan ọnọdụ. Ihe ọzọ dị mkpa kpatara ya bụ na ị zụrụ erughị eru nfuli na akụkụ site ndị dị ọnụ ala price.
Atlas mgbapụta nwere mgbe foundry shop na roba ụlọ ahịa na labs na QC otu. Anyị na-emepụta na ịzụlite dị iche iche ihe onwunwe nfuli na akụkụ site ahịa chọrọ.
Ike ọla dị ka na-acha ọcha ígwè alloys, nke nwere patent nchebe site n'ịgbanwe ọdịnaya nke elu chromium alloy. Ha na-na-na-eji maka ike metal minerals nhazi na ike na-egbusi ahụ.
Rubbers na polyurethanes na-eji na-ejizi mma ahụ na chemical-eguzogide ma na-ebelata-eyi.
Ceramics enye ọzọ uru n'ihi na ọtụtụ corrosive na abrasive arụ ọrụ na ọnọdụ.
The slurry mgbapụta akara ụdị
Ị ga-atụle ihe nke ọma mgbe ị na-ahọrọ a mgbapụta akara ụdị. Mbukota akara bụ ndị dị ọnụ ala ma ndị kasị dị irè akara usoro. Otú ọ dị, dị ọcha gland oru mmiri dị mkpa maka na akara ụdị. Otu ọzọ nhọrọ bụ expeller akara, e nweghị gland mmiri mkpa na na case.Another nhọrọ n'ibu akara, o nwere ike ịbụ oké ọnụ karịa mgbapụta onwe ya.
The slurry mgbapụta arụmọrụ
Anyị na-enye arụmọrụ akụkụ ọ bụla nke anyị mgbapụta maka ndị ahịa iji họrọ kacha mma ụdị. Atlas mgbapụta nwekwara ezitekwara mgbapụta ahọpụta ọrụ anyị onwe anyị.
Mgbapụta anwụrụ esemokwu losses
Mgbapụta anwụrụ esemokwu abawanye mgbe pumping slurry tụnyere doro anya mmiri. Atlas mgbapụta ga-ewere ya n'ime echiche mgbe ahọpụta nfuli maka customer.Other nsogbu, biko kpọtụrụ Atlas mgbapụta.
* Olee ebe ị na-emi odude?
Atlas mgbapụta n'ichepụta ụlọ ọrụ dị na 3 ebe ke China, na 4 Branch ụlọ ọrụ ná mba ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịkpọtụrụ China ụlọ ọrụ ozugbo ma ọ bụ gị onwe gị kwa nwere ike kpọtụrụ ebe mkpara ma ọ bụrụ na gị na obodo nwere alaka anyị ụlọ ọrụ. Kpọtụrụ nkọwa pụrụ ịchọta HERE
Ụlọ ọrụ na alaka Location
China owuwu Shijiazhuang, Hebei
China owuwu Tieling
China owuwu Benxi, Liaoning
Australia Branch Perth
* Gịnị bụ nnweta akụkụ?
Anyị nwere saa mbara yiri nkata nke nnọchi na mmezi akụkụ sitere na site wear akụkụ, housings, akàrà, biarin na-agba mgbakọ. Anyị ngwaahịa na ọtụtụ akụkụ maka anyị ihe nkịtị nlereanya nha na nhazi. Pụrụ iche ihe na-erughị nkịtị akụkụ dị na a kwa iji ndabere.
Gịnị bụ gị ike?
500 tọn oge ọgbụgba kwa ọnwa
Max oge ọgbụgba wts bụ ruo 11000lbs
Max machinign n'obosara bụ na gburugburu 16.5 ụkwụ
Ise axis elu kpọmkwem machining center
Olee ụdị ihe onwunwe ka ị bụ ọkachamara?
High chrome ọcha ígwè
Gray & Ductile ígwè
High manganese ígwè
Ekwe Omume mmejọ na mwepụ / Ngwọta
mmejọ Reason Mwepụ / Ngwọta
Mgbapụta ada ada ka discharges ọ bụla mmiri mmiri Air eri eri n'ime mmiri ma ọ bụ gland. Ezughị oke direction nke mgbapụta adiana & impeller eyi. Mmiri anwụrụ egbochi. Kaakwa ya akara leakage. Lelee direction nke adiana na dochie impeller mwepụ ngọngọ.
Aro ike oriri bụ oké. Gland ókè tightened megide mbukota yiri mgbaaka. N'usoro akụrụngwa rubbing na a anyịnya akụkụ. Amị adọ aka ná ntị. Ụgbọala a belt erughị ala ahụ esika ike. Igba ọnụego oke buru ibu. Imipu ọsọ & ruru kwa elu. Misalignment ma ọ bụ unparallel nke mbanye aro na nfuli aro Tọpụ gland bolts. Mwepụ na ụlọ akwụkwọ ji agwụ akụkụ. Dochie amị. Ịgbazi belt. Modifying mgbapụta ọrụ na-agba. ukpụhọde drive & mgbapụta aro
Amị dị n'elu kpo oku. Lubricants ukwuu ma ọ bụ obere. Nwere adịghị na mmanu. Iburu eyi. N'ígwè dị ka chọrọ. Dochie ọhụrụ mmanu. Dochie ọhụrụ amị.
Amị nwere obere ndụ Misalignment ma ọ bụ unparallel nke mbanye na mgbapụta aro. Okporo kpebisiri. Impeller ekwesịghị ruru ka na-eyi. Foreign ihe banyere n'ime amị ma ọ bụ na-ezughi oke lubrication. Ezughị oke Usoro soro na kwesịrị ekwesị biarin. Ịgbazi mbanye na mgbapụta aro. Dochie aro. Wepụ rubbing na dochie ọhụrụ impeller. Hichaa amị. Dochie ma ọ bụ refitting ndị amị.
Oké leakage si nri igbe Mbukota yiri mgbaaka oké eyi. Okporo uwe eyi. Unyi akara mmiri. Dochie ọhụrụ mbukota yiri mgbaaka. Dochie aro uwe. Gbanwee ọcha akara mmiri
Mgbapụta vibrates ma ọ bụ oké ụzụ. Iburu eyi.Impeller ekwesịghị. Air banyere n'ime mmiri anwụrụ ma ọ bụ na-egbochi. Igba ọnụego na-abụghị edo na mgbapụta bụghị primed. Dochie ọhụrụ biarin. Dochie ọhụrụ impeller. Ihapu ikuku na wepu ngọngọ. Mma na mgbapụta nri.
Nke 201 Taihang Street, Hi-Tech Mpaghara, Shijiazhuang Hebei, China
© Copyright - 2019-2020: All Rights echekwabara. Guide - Featured Products - Sitemap - Mobile Site